Al shabab oo xiray Dad fududeeyey Duqeyn lala eegtay Hogaamiyaashooda | Keydmedia
18 September 2020 Madasha xisbiyada: Guddiga doorashada halagu daro saamileyda siyaasadda
18 September 2020 Cumar Filish miyuu Iloobay Malaayiintii uu Matalaayey?
18 September 2020 CC Shakuur oo fariin u diray Ra’iisul Wasaaraha cusub
18 September 2020 Dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan
17 September 2020 Farmaajo oo magacaabay Ra’iisul wasaare cusub
17 September 2020 Xildhibaan sidoo kale ahaa Wasiiru dowle oo la dilay
17 September 2020 Xildhibaan lagu dilay Jowhar
17 September 2020 Khayre oo soo dhaweeyay heshiiska doorashadda
Al shabab oo xiray Dad fududeeyey Duqeyn lala eegtay Hogaamiyaashooda
Sablaale (KON) - Kooxda Al shabaab ayaa ku xiray Dad badan Saakay Deegaanka Dhaay Tubaako & Sablaale, kuwaasi oo ay uga shakiyeen inay hageen Diyaarado Duqeymo Cirka ka fuliyay Gobolka Shabeellaha Hoose.
Warar hoose oo KON helayso ayaa sheegaya in Dadka la qabtay oo Tiradooda gaarayso 20 ay ku jiraan Saraakiil Al shabaab, waxaana lagu qabtay Saakay Howlgal ay Kooxda kawo Degaanka Dhaay Tubaato & Degmada Sablaale, waxaana Wali jirin Fah Faahin rasmi ah oo laga haayo Dadka lagu dilay ama lagu dhaawacay Duqeyntii Xalay.
Xiisado ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa Degmada Baraawe, kadib markii ay Ciidamada DFS & AMISOM ay billaabeen inay kusoo dhawaadaan Magaaladaasi oo la rumeysan yahay inay ku sugan yihiin Horjoogiyaasha ugu sareeya ee Kooxda Al shabaab.
Bishii November 2013, Diyaarad Drone ah ayaa waxa ay ku dishay Duqeyn Horjooge Ibraahim Ali oo loo yaqaanay "Anta Anta" kaasi oo Al shabaab u qaabilsanaa samaynta Walxaha ay u adeegsato Kooxda Qaraxyada ay dalka ka fuliyaan.
Xalay Fiidkii Diyaarad kale oo Drone ah oo laga leeyahay Mareykanka ayaa Weerar Cirka ah ku qaadey Xarunta ay uga shirayeen Al shabaab Duulaanka uga imaanaya Ciidanka DFS & AMISOM, waxaana Kulanka uu ka dhacayay inta u dhaxaysa Dhaay Tubaako & Haaway, sida uu sheegay Gudoomiyaha Gobolka C/qaadir Siidii.
Wixii kusoo kordhaa Warka kala soco Wararkeena danbe Insha Allah.!
Madasha xisbiyada: Guddiga doorashada halagu daro saamileyda siyaasadda
Warar 18 September 2020 19:52
Madasha xisbiyada qaran ayaa dalbatay in saamileyda siyaasadda qeyb laga siiyo xubnaha guddiga doorashada ee lasoo dhisi doono.
Cumar Filish miyuu Iloobay Malaayiintii uu Matalaayey?
Warar 18 September 2020 17:15
CC Shakuur oo fariin u diray Ra’iisul Wasaaraha cusub
Warar 18 September 2020 10:56
Dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan
Warar 18 September 2020 10:25
Warar 14 September 2020 23:49
Keydmedia Online ayaa waxaa soo gaartay nuxurka Shirka Muqdisho ee Dowladda Federaalka iyo Madaxda Maamul Goboleedyada oo goor dhawayd lagu soo kala dareeray maalinkii Labaad.